Heerka horumarinta XFCE 4.16 wuxuu bilaabmayaa | Laga soo bilaabo Linux
Marxaladda horumarinta XFCE 4.16 ayaa bilaabmaysa
Shalay Soosaarayaasha desktop-ka ee XFCE ayaa lasoo saaray iyada oo loo marayo ogeysiis dhameystirka wejiyada qorshaynta iyo ku tiirsanaanta ayaa barafoobaya iyo u wareejinta mashruuca marxaladda horumarka waxa uu noqon doono nooca cusub ee XFCE 4.16.
Horumarinta waxaa loo qorsheeyay in la dhameystiro bartamaha sanadka soo socda, ka dib taas waxay sii joogi doontaa inay samayso saddex sii-deyn oo hordhac ah ka hor sii-deynta ugu dambeysa. Isbeddelada soo socda, waa la calaamadeeyay dhamaadka taageerada ikhtiyaariga ah ee GTK2 iyo casriyeynta is-dhexgalka adeegsadaha.
Tan iyo markii Intii lagu guda jiray geeddi-socodka horumarinta ee nooca 4.14, horumariyayaashu waxay isku dayeen inay dejiyaan deegaanka GTK2 si GTK3 adoon badalin interface-kahalka loogu talagalay XFCE 4.16 waxay ka faalloodaan taas qorsheyso inaad joojiso taageerada GTK2 oo aad si buuxda u isticmaasho GTK3, marka lagu daro in shaqadu bilaabi doonto inay hagaajiso muuqaalka kore ee darbiyada.
Sidii lagu balamay, waqtigan waxaan isku dayi doonaa inaan sii wadno jadwal adag, sidaa darteed annaga oo aan sii dheerayn: wajiga horumarinta ee ku wajahan Xfce 4.16 ayaa si rasmi ah u bilaabmay!
Intii lagu guda jiray shaqadan, waxaa jiri doona taageero lagu qurxiyo daaqadaha dhinaca macaamilka (CSD,) kaas oo cinwaanka daaqada iyo meertada uusan ku sawireyn maareeyaha daaqada, laakiin arjiga laftiisa. Waxaa la qorsheeyay in la isticmaalo CSD si loo hirgeliyo madax wax qabad badan leh iyo looxyada qarsoon ee sanduuqyada wada hadalka ee la xiriira beddelka dejinta.
Qaar ka mid ah astaamaha bar cinwaanka, sida loo xiro daaqadda, waxaa lagu beddeli doonaa xulashooyinka astaamaha ah taasi waxay umuuqataa mid saxsan markaad dooranayso mawduuc mugdi ah. Taageerada muujinta qaybta "Waxqabadka Desktop" ayaa lagu dari doonaa menu macnaha guud ee macluumadka iyadoo la adeegsanayo toobiyeyaasha si loo bilaabo codsiyada, taas oo u oggolaanaysa inay bilaabaan darawalo u gaar ah dalabka, sida furitaanka daaqad Firefox ah oo dheeri ah.
Waxaan sidoo kale la ciyaari doonnaa qurxinta macmiilka dhinaceeda halka aan u maleyno inay macno sameyneyso (tusaale ahaan, bedelida waxa loogu yeero XfceTitledDialog, oo loo adeegsado dhammaan wadahadallada qaabeynta iyadoo la adeegsanayo nooca HeaderBar).
Maktabada libgtop-ka ayaa lagu dari doonaa tirada dadka ku tiirsan, taas oo loo adeegsan doono in lagu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan nidaamka wadahadalka "About".
Isbedelo adag lama filayo maamulaha faylka Thunar dhexgalka, laakiin horumarin yar oo badan ayaa loo qorsheeyay si loo fududeeyo la shaqeynta faylasha. Nooca cusub ee Thunar waa inaad ku yeelataa muuqaal cusub API-ga plugin, oo kuu oggolaanaya inaad ku darto falal cusub oo aad ku kaydiso goobaha muuqaalka galka. Tusaale ahaan, waxaa suurtagal noqon doonta in la keydiyo hababka noocyada kala duwan ee ku saabsan tilmaamaha shaqsiyeed.
Waxaa sidoo kale la qorsheeyay in lagu daro qaabeeyaha awood u leh inuu ku balaadhiyo macluumaadka muraayada soo saarida kormeerayaal fara badan, oo qaraarkoodu ka duwan yahay.
Si loo xakameeyo taranka midabka, qorshaynta si aad u diyaariso nidaamkaaga asalka ah la falgal midab leh, iyada oo aan loo baahnayn xiccd. Maamulaha maaraynta awooda, hab iftiinka iftiinka habeenkii ayaa la filayaa inuu soo muuqdo sida shaqo waqtiyeysan oo u adeegsan doonta sida shaashadda shaashadda si loo yareeyo culeyska indhaha.
Sidoo kale dhinaca kale, horumariyeyaashu waxay qorsheeyeen XFCE 4.16 inay ku daraan qaar hagaajinta qalabka korontada oo ay xayeysiintu iftiimineyso ku darida hab mugdi ahiyo sidoo kale inay ku jiraan histogaraam batteriga ku jira wadahadalka qaabeynta si loo arko yaraanshaha bateriga iyo hirgelinta muuqaal muuqaal ah si loola socdo dheecaanka batteriga.
Sidaan kor ku soo sheegnay, wareeggan waxaa loogu tala galay inuu ahaado mid fudud oo noo ogolaada inaan "ku dheganaano qorshaha" oo aan u helno nooc ka mid ah saldhigeena isticmaalaha wax ka horreeya labadii nooc ee hore.
Ugu dambeyntii haa Waxay xiiseynayaan inay wax badan ka ogaadaanama ku saabsan ogeysiiska iyo ogeysiisyada soo socda ee ku saabsan jawiga desktop-ka, waad hubin kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Marxaladda horumarinta XFCE 4.16 ayaa bilaabmaysa
War wanaagsan, waa weyn!
Ka jawaab Autopilot
Ntopng: Kormeeraha taraafikada jiil jiil cusub oo heer sare ah
Ubuntu Mate 19.10 waxay la timid Kernel 5.3, Mate 1.22.2, mashaariic cusub oo mas'uul ah iyo inbadan